4 ဥရောပမှာတော့မီးရထားခရီးသွား Pre-ခရီးစဉ် Essentials | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >4ဥရောပမှာတော့မီးရထားခရီးသွား Pre-ခရီးစဉ် Essentials
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 21/02/2020)
ဥရောပမှာခရီးသွားအကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသင်ကနေရာတိုင်းရထားရှိရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဒါဟာအရှိဆုံးကျယ်ပြန့်အတောအတွင်းဖြစ်ပါသည် တင်ဆောင် မှအကြိုက်ဆုံးနှင့်လူများစွာရဲ့ တိုက်ကြီးခရီးသွားလာ. သူတို့ဆုံးဖြတ်မတိုင်မီပြည်သူ့အချို့သောမေးခွန်းများမေးကြဘူး ရထားယူ, ထိုကဲ့သို့သောငါလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ကြဘူးဘယ်မှာအဖြစ် Pre-ခရီးစဉ်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ? ငါအချိန်ဇယားကဘယ်လိုစစ်ဆေးကြဘူး? ငါနိုင်သလား တယောက်ကိုတယောက်တိုင်းပြည်ကနေဖြတ်ကူး? ဘာတွေလဲ ညဥ့်ရထား ကဲ့သို့?
ဥရောပသားအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်မီးရထားကွန်ယက်ကိုအားဖြင့်ဆက်စပ်ပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းပြည်သည်၎င်း၏ရထားလမ်းကုမ္ပဏီရှိပြီး, ထိုကွောငျ့, နှင့်အတူ၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက် အချိန်ဇယား နှင့်နှုန်းထားများ. သငျသညျတူညီသောတိုင်းပြည်အတွင်းရထားသွားလာလိုလျှင်, မည်သည့်နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမရှိဘဲ, ဒါဟာနေဆဲသင်တို့ဆီသို့ခရီးစဉ်နှင့်အတူလုပ်ပေးမယ်လို့သကဲ့သို့သင်တို့တစ်ဦးကရထား Save ကိုတိုက်ရိုက်သွားပါအကြံပြုသည် Skyscanner. သင်ကဘာလဲဆိုတာမသိလျှင်, Google ကသငျသညျအဖြေပေးတော်မူမည်. အားလုံးနီးပါးဝက်ဘ်ဆိုက်များအင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း, ဒါကြောင့်အချိန်ဇယား navigate နှင့်စစျဆေးဖို့လွယ်ကူပါတယ်. သင်သည်အခြားတဦးတည်းတိုင်းပြည်ကနေရထားနဲ့ခရီးသွားလိုလျှင် (အမြဲဥရောပအတွင်း) သင်သည်လည်းတစ်ဦးအတွက်လမ်းကြောင်းရှာဖွေသင့်တယ် ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားများကဲ့သို့ app ကို.
pre-ခရီးစဉ်အခြေခံလိုအပ်ချက်များတစ်ခုမှာကျိန်းသေဖြစ်ပါသည် လက်မှတ်တွေ. တချို့ကမီးရထားကျမ်းပိုဒ် (အထူးသဖြင့်သူတို့၏အမျိုးအ အရှိန်အလွန်မြန်သော နှင့်မြို့တော်သို့မဟုတ်မြို့ကြီးများတွင်ချိတ်ဆက်သောသူတို့ကို) အခါထွက်ခွာနေ့စွဲချဉ်းကပ်စျေးနှုန်းမြင့်တက်လေ့; အခြားသူတွေရှိပါတယ် (ဒေသခံရထား နှင့်အနီးအနားရှိမြို့များကိုလင့်ထားသောရှိသူများ) ကြောင်းအမြဲအတူတူပင်စျေးနှုန်းကိုစောင့်ရှောက်. သင့်ထံမှခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင် မြို့တော်မှမြို့တော်, အကောင်းဆုံးကိုစျေးနှုန်းအရကြိုတင်မဲအတွက်လက်မှတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးက. သင် apps များမှတဆင့်လက်မှတ်တွေကိုဝယ်လျှင် (များသော ဥရောပရထားသည့်ကုမ္ပဏီများ အရမ်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် app ကိုရှိ), သင်တစ်ဦး QR ကုဒ်ကိုနဲ့အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်သင့်ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေကားမောင်းသူဖျောပွနိုငျ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင် print ထုတ်ရန်မလိုပါ.
အဆိုပါဘူတာမှ Get လုပ်နည်း Pre-ခရီးစဉ် Essentials မှသော့ချက်
ရထားခရီးသွားလာ ပတ်သက်. ကောင်းသောအရာဖြစ်ပါသည် အဆိုပါဘူတာ မြို့အလယ်ဗဟိုတွင်အများအားဖြင့်ဖြစ်ကြပြီးမက်ထရိုအားဖြင့်အလွယ်တကူများမှာ, ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ခြေလျင်. သင်တစ်ဦးလေဆိပ်သွားဖို့တစ်နာရီခရီးရန်မလိုပါ (သင်မြို့ရဲ့ဆင်ခြေဖုံးပေါ်မှာဆိုရင်မဟုတ်လျှင်, ယေဘုယျ၌ဤမျှကာလပတ်လုံးကြာဘယ်တော့မှပေမယ့်). အကယ်. သင်က နည်းနည်းအိတ်နဲ့အတူခရီး, သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့သှားနိုငျ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. သငျသညျကအရမ်းတင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက္ကစီကိုအကောင်းဆုံး option ဖြစ်တယ်. အဲဒါကိုပြောမနာပါဘူး: တော်တော်များများရထားဘူတာရှိသည်သောမြို့ကြီးများရှိပါတယ် (ဥပမာ, ပဲရစ်) ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့ရထားကနေထွက်ခွာအရာကိုသေချာပါစေ. တစ်ခါတစ်ရံသင်တယောက်ကိုတယောက်ဘူတာမှလွှဲပြောင်းရန်ရှိသည်ဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ.
ဥရောပရထားအတိအကျတစ်မိနစ်မှာထွက်သွား (အချို့များအတွက်နှောင့်နှေးလည်းမရှိမဟုတ်လျှင် ရာသီဥတုအကြောင်းပြချက်). ပတ်သက်. ဘူတာရုံမှရယူခြင်း 15-20 မိနစ်မတိုင်မီအမြဲတမ်း Pre-ခရီးစဉ်အခြေခံလိုအပ်ချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်. အလွန်ရှည်လျားဖြစ်ကြပြီးတစ်ခါတစ်ရံသင်ပလက်ဖောင်းရဲ့အဆုံးရတွေအများကြီးလမ်းလျှောက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုရထားရှိပါတယ်ကိုသတိပြုပါ. တဦးတည်းမြို့နှင့်အခြားအကြားမှတ်တိုင်များများသောအားဖြင့်မိနစ်အနည်းငယ်ထက် ပို. ကြာရှည်ပါဘူး.
ဤသည်ဥရောပနှင့်သင်ကြိုတင်တဦးတည်းယူဆုံးဖြတ်ခြင်းမှသိပါဖို့ရှိသည်အမှုအရာအတွက်မီးရထားခရီးစဉ်များအတွက် Pre-ခရီးစဉ်အခြေခံလိုအပ်ချက်များအပေါ်တစ်ဦးအသေးပေမယ့်အထောက်အကူဖြစ်စေလမ်းညွှန်ခဲ့သည်. ကျနော်တို့မျှော်လင့် အတှေ့အကွုံ သငျသညျအကြိုးစီးပှားကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖွစျလိမျ့မညျ.
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်-A-ရထား Enter ဆိုလိုရာခရီးရန်သင့်မီးရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်ဖို့3မိနစ်များ, ဈေးအပေါဆုံးရထားလက်မှတ်တွေနှုန်းထားများမှာ obnoxious ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများစိတ်သက်သာရာ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-train-pre-trip-essentials-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ဝန်စည် #အဖုံး europeantravel ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ်